Kheyre oo ku gacan seeray canshuur dhaafkii uu sameeyey Beyle, soona saaray amar culus - Caasimada Online
Home Warar Kheyre oo ku gacan seeray canshuur dhaafkii uu sameeyey Beyle, soona saaray...
Kheyre oo ku gacan seeray canshuur dhaafkii uu sameeyey Beyle, soona saaray amar culus
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shuruud adag ku xiray inay hey’adaha dowladda sameeyaan canshuur dhaaf kadib waraaq saxiixan oo uu soo saaray.
Xasan Cali Kheyre ayaa joojiyey in shuur dhaaf loo sameeyo hey’adaha iyo ganacsatada wax kala soo daga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo Dakadda Muqdisho.
Bishii April ee dhawaan dhamaatay ayuu Ra’isulwasaare Kheyre waraaq toos ah u diray wasaaradda Maaliyadda iyo Hey’adaha Maaliyadda dalka ka jiro, wuxuuna ka dhawaajiyey inay jiraan waxyaabo muujinaya isku dayo lagu doonayo in qaab aan sharci aheyn looga faa’ideysto canshuur dhaafka dowladda, midaasna ay tahay musuq maasuqa ay dowladda la dagaalameyso.
Ra’isulwasaaraha ayaa amray inaysan wasaaradda bixin Karin canshuur dhaaf iyadoo aan ogolaansho laga heysan isaga.
Canshuur dhaafka uu Kheyre ka hor yimid waxaa horey u sameeyey wasiirka Maaliyadda Beyle, waxaana jiro loolan adag oo ka dhaxeeyo labadaan Mas’uul, xilli Kheyre lagu eedeeyey inuu faragelin qaawan ku hayo shaqadii wasaaradda Maaliyadda
Haddaba halkaan hoose ka aqriso waraaqda Documentiga ah oo ay heshay Caasimadda Online: